Izici "vmenonki": kungani udinga isicelo UTII
Sebenzisa intela olulodwa imali kwabalelwa kukhona izinkampani ukuthi uhlangabezane nezimfuneko ezithile. Le modi isetshenziswa ibhizinisi elincane futhi ukwelashwa intela ekhethekile.
Kuyini UTII ezithakazelisayo umbuso futhi abangakwazi ukuyisebenzisa
UTII kuyinto umbuso impela, kodwa ngeshwa, abakwazi ukusizakala zonke izinkampani. Ukuze ukuya "vmenonku", inkampani kudingeka ukugcwalisa eziningi izidingo.
Ukuhlela kwathatha UTII, kumelwe siqale ukucacisa ukuthi umphumela umbuso okunjalo endaweni mayelana nale ndaba, lapho inkampani ebhaliswe. Okwamanje, akuzona zonke amadolobha wasungula umbuso ezinjalo. Okunye izimo ebalulekile kwathatha "vmenonku" uthathwa nokulandela inani elithile imingcele futhi ubukhulu isikhala okudayisa. Umkhawulo waqasha izisebenzi ngeke sidlule abantu eziyikhulu, endaweni yokuhweba - 150 square metres. m.
UTII umbuso ekhethekile lwenzelwe izinhlangano amancane ukwehlisa zonke izibopho zentela, accounting, ngakho isicelo UTII kukhona lobunini yedwa LLC, uhlela usebenza ngezinga elincane. Kubalulekile kakhulu ukuthi inkampani ayizange ebhalwe ohlwini bentela ezinkulu.
Ngesinye isikhathi esededelwe, ungabhalisela UTII futhi indlela yokukwenza
Ukuze ukuya intela umbuso ekhethekile, kufanele ubhalise njengekhasimende wentela e ehhovisi lentela. Lokhu ngokuvamile kwenziwa ngesikhathi kuhanjiswa kwemibhalo sokubhaliswa, kodwa zingakapheli izinsuku eziyi emihlanu ngemva kokuthola isitifiketi. Isicelo UTII kungaba zithunyelwe kunoma iyiphi usuku sekubika, kodwa ukusizakala usomabhizinisi umbuso can Januwari kuphela kusuka 1. Uma inkampani kuvula uhlobo olusha bhizinisi, bese uya UTII kungaba yisiphi usuku nonyaka.
Ukuhlinzeka amaphepha adingekayo lolu shintsho kufanele aphathwe kuziphathimandla asimeme endaweni yebhizinisi. Kwezinye izimo, abaqashi kukhona bebophekile ukuba ubhalise endaweni umbuso ekhethekile sokubhalisa inkampani. Leyo misebenzi ifaka phakathi ukukhangisa, izimakethe kanye ukuhweba pasazhiroperevozki.
Indlela ugcwalise isicelo UTII zesikhashana
Tax Inspectorate iye yasungula uhlelo ifomu lesicelo, okuyinto esetshenziswa ushintsho kule umbuso ekhethekile. izinkampani ezibhalisiwe ngesimo LLC Ukuze, wasebenzisa isicelo UTII 1, futhi osomabhizinisi - ifomu UTII 2.
kuhanjiswa engeziwe kwemibhalo yokubhalisa kuyodingeka. Isicelo anganikeza intela incwadi zibhaliswe ne uhlu nezinamathiselo eposini Russia, idlule iziteshi electronic zokuxhumana noma alethe mathupha dokhumenti. Uma ifomu UTII courier yerenti, uzodinga ngokusemthethweni igcwaliswe amandla ommeli.
Regulation isicelo sezinsuku zebhizinisi ezinhlanu emva igunya lokuphatha ubeka wentela kwi-akhawunti noma amnike ukwenqaba ngoba kufanelekile.
Ekwakhiweni Accounting usebenzisa imibuso ekhethekile
Kwemibiko yezimali nokubika intela usebenzisa UTII libhekene malula futsi kancane nezimemezelo kubaqoqi ekupheleni kwesikhathi sentela. -Daylight izinkampani UTII ekhululiwe ukukhokha izintela eziningi, kufakwe endaweni yawo intela olulodwa imali kwabalelwa.
Uma inkampani okhokhela inkokhelo abasebenzi waqasha ke ngalezizinto kudingeka ukushaja ukuze ezimalini umshuwalense nokubika kubo ekupheleni ngekota. Ngaphezu kwalokho, i-akhawunti UTII hhayi ngeke zivimbele kusukela kuhanjiswa kwezitatimende zezimali ekupheleni konyaka. Entela ngoba intela imba intela kwabalelwa nsuku wekota kungakadluli 20 lwenyanga elandelayo, futhi sikhokhe nezintela zabo nge lwesi-25 enyangeni efanayo.
Yiziphi izinkomba ekhona formula intela olulodwa
Ifomula ukubala lemali yokugcina intela yakhiwa eziguquguqukayo eziningana futhi kuncike ukusebenza siqu inkampani. Lapho kubalwa UTII isici ezimbili eziyisisekelo, okuyinto kuyalungiswa ngonyaka neziphathimandla zokulawula. Kule ndaba, kuncike intela kushintsha njalo ukubaluleka kwayo. Ukuze uthole ukuthi leli zinga, sicela uxhumane nehhovisi yentela yakho.
Futhi indima enkulu kulesi sibalo kwesilinganiso sentela kudlala inzuzo eziyisisekelo, okuyinto esibekwe umbuso futhi kuncike hlobo amasevisi anikezwa.
Intela esihlanganisiwe ngengeniso kwabalelwa yiyona inzuzo kakhulu futhi evamile intela umbuso, ngakho izinkampani ogama imisebenzi ukuhlangabezana nemibandela imibuso ekhethekile, kutuswa ukuba banake ke ukuze nokwandisa intela ezibanjwayo.
Sokusabalalisa umsebenzi kwezimali izintela
Umnqamulajuqu wokukhokha intela ngesikhathi USN kuhlinzekelwe ngaphansi komthetho.
Umthwalo wentela: Ukukhonjwa kanye kwebalingisi of izingxenye zalo
Kusho computer nokuthi kanjani namalungu awo?
Anemone sylvestris ivikelwe isimo
Yini ukubona e Brest futhi endaweni ezungezile?
Umuthi 'Lespeflan ": yokusetshenziswa
Isikebhe "Baby": izici nokubuyekezwa
Ukudla ukutheleleka ubuthi: izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela
Uhlobo olukhethekile lwe-arachnids yi-cirri. Izipikisi, ikhono labo ekuthungeni amanethiwekhi liyakuthandwa
UMthetho Federal "Technical weMithethonqubo izidingo zokuphepha umlilo"
Pennsylvania - State of the legumbi. Amaqiniso ethakazelisayo Pennsylvania Amadolobha
Zone Okuvikelwe amanethiwekhi ezishisayo: bangaki amamitha kumele avikelwe?
Indlela ukubhalisa inkampani yakho siqu?